यूहन्ना १ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
१ सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वरसित हुनुहुन्थ्यो र वचन ईश्वरीय हुनुहुन्थ्यो।* २ उहाँ सुरुमा परमेश्वरसित हुनुहुन्थ्यो। ३ सबै थोक उहाँद्वारै अस्तित्वमा आए, उहाँविना एउटै थोक पनि अस्तित्वमा आएन। उहाँद्वारा जे अस्तित्वमा आयो, ४ त्यो जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको निम्ति ज्योति थियो। ५ अनि त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्किरहेको छ तर अन्धकारले त्यसलाई दबाउन सकेको छैन। ६ परमेश्वरले आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा पठाउनुभएको एक जना मानिस देखा परे। तिनको नाम यूहन्ना थियो। ७ ती मानिस ज्योतिको साक्षी दिन अनि यसरी तिनीद्वारा हरकिसिमका मानिसहरूले विश्वास गर्न सकून्‌ भनेर साक्षीको रूपमा आए। ८ तिनी त्यो ज्योति थिएनन्‌, बरु त्यस ज्योतिको साक्षी दिन आएका थिए। ९ हरकिसिमका मानिसहरूलाई ज्योति दिने साँचो ज्योति संसारमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। १० उहाँ संसारमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँद्वारै संसार अस्तित्वमा आयो तर संसारले उहाँलाई चिनेन। ११ उहाँ आफ्नो घरमा आउनुभयो तर उहाँका आफ्नै मानिसहरूले उहाँलाई स्वीकारेनन्‌। १२ तर ज-जसले स्वीकारे, तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान बन्ने अधिकार दिनुभयो, किनकि तिनीहरूले उहाँको नाममा विश्वास गरेका थिए; १३ अनि तिनीहरू न रगतद्वारा, न शारीरिक इच्छाद्वारा, न मानिसको इच्छाद्वारा तर परमेश्वरद्वारा जन्मिएका थिए। १४ यसरी वचन मानिस हुनुभयो र हामीमाझ बस्न थाल्नुभयो अनि हामीले उहाँको गौरव देख्यौं, यस्तो गौरव, जुन एक मात्र छोराले आफ्नो बुबाबाट पाउँछ; अनि उहाँ असीम अनुग्रह र सत्यले भरिपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। १५ (यूहन्नाले उहाँको विषयमा साक्षी दिए। हो, यसो भन्दै कराउने वास्तवमा तिनी नै थिए: “मपछि आउने मभन्दा अघि जानुभएको छ, किनकि मभन्दा पहिल्यै उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो।”) १६ हामी सबैले उहाँबाट प्रशस्त गरी असीम अनुग्रह पायौं, किनकि उहाँ असीम अनुग्रहले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ। १७ किनकि मोशाद्वारा व्यवस्था दिइयो तर येशू ख्रीष्टद्वारा* भने असीम अनुग्रह र सत्य आयो। १८ परमेश्वरलाई कुनै मानिसले कहिल्यै देखेको छैन; उहाँको विषयमा आफ्नो बुबाको काखमा बस्नुहुने एक मात्र छोरा, जो ईश्वरीय हुनुहुन्छ, उहाँले बताउनुभएको छ। १९ तब यहूदीहरूले यरूशलेमबाट पुजारी अनि लेवीहरू पठाए र यूहन्नालाई “तिमी को हौ?” भनी सोध्न लगाए। २० तिनले त्यसको जवाफ दिन इन्कार गरेनन्‌, बरु “म ख्रीष्ट होइन” भनी खुलेआम स्वीकारे। २१ अनि उनीहरूले तिनलाई सोधे: “त्यसोभए तिमी को हौ त? के तिमी एलिया हौ?” अनि तिनले जवाफ दिए: “म होइन।” “के तिमी भविष्यवक्ता हौ त?” अनि तिनले जवाफ दिए: “होइन!” २२ तब उनीहरूले तिनलाई सोधे: “त्यसोभए तिमी को हौ? हामीलाई भन र हामीलाई पठाउनेहरूलाई हामी जवाफ दिन सक्नेछौं। आफ्नो विषयमा तिमी के भन्छौ?” २३ तिनले जवाफ दिए: “भविष्यवक्ता यशैयाले भनेझैं उजाडस्थानमा ‘यहोवाको बाटो सोझो बनाओ भन्दै कराउने मानिस मै हुँ।’ ” २४ तिनीकहाँ यी मानिसहरूलाई फरिसीहरूले* पठाएका थिए। २५ त्यसैले उनीहरूले यसो भन्दै प्रश्न गर्न थाले: “यदि तिमी ख्रीष्ट वा एलिया वा भविष्यवक्ता होइनौ भने तिमी किन बप्तिस्मा* गराउँछौ?” २६ यूहन्नाले तिनीहरूलाई जवाफ दिए: “म पानीमा बप्तिस्मा गराउँछु। तिमीहरूमाझ एक जना हुनुहुन्छ जसलाई तिमीहरू चिन्दैनौ, २७ उहाँ मपछि आउँदै हुनुहुन्छ तर उहाँको जुत्ताको फित्ता फुकाल्न योग्यको समेत म छैन।” २८ यी घटनाहरू यर्दन नदीपारि बेथानीमा भएका हुन्‌, जहाँ यूहन्नाले बप्तिस्मा गराउँथे। २९ भोलिपल्ट तिनले येशूलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखे र तिनले भने: “हेर, परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप हटाउनुहुन्छ! ३० उहाँ तिनै मानिस हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भनेको थिएँ कि मपछि आउने एक जना मानिस मभन्दा अघि जानुभएको छ, किनकि मभन्दा पहिल्यै उहाँ अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो। ३१ मैले पनि उहाँलाई चिनेको थिइनँ तर उहाँ इस्राएलमा प्रकट होऊन्‌ भनेर नै पानीमा बप्तिस्मा गराउँदै म आएँ।” ३२ यूहन्नाले साक्षी दिंदै यसो पनि भने: “मैले पवित्र शक्तिलाई ढुकुरको रूपमा आकाशबाट ओर्लिंदै गरेको देखें र त्यो उहाँमाथि बस्यो। ३३ मैले पनि उहाँलाई चिनेको थिइनँ तर पानीमा बप्तिस्मा गराउन मलाई पठाउनुहुनेले नै मलाई भन्नुभयो, ‘जसमाथि पवित्र शक्ति ओर्लिंदै र बसदै गरेको तिमीले देखौला, पवित्र शक्तिमा बप्तिस्मा गराउने उहाँ नै हुनुहुन्छ।’ ३४ अनि मैले त्यो देखेको छु र उहाँ नै परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ भनेर साक्षी दिएको छु।” ३५ त्यसको भोलिपल्ट फेरि यूहन्ना आफ्ना दुई जना चेलासित उभिरहेका थिए। ३६ अनि येशूलाई हिंड्दै गरेको देखेपछि तिनले भने: “हेर, परमेश्वरको थुमा!” ३७ तिनको कुरा सुनेपछि ती दुई जना चेला येशूको पछि लागे। ३८ तब येशूले फर्केर हेर्दा तिनीहरू आफ्नो पछि-पछि आइरहेको देख्नुभयो अनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “तिमीहरू के चाहन्छौ?” तिनीहरूले उहाँलाई जवाफ दिए: “हे रब्बी, (जसको अनुवाद गर्दा अर्थ हुन्छ, गुरुज्यू) तपाईं कहाँ बस्नुहुन्छ?” ३९ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “आओ, अनि तिमीहरूले देख्नेछौ।” त्यसैले तिनीहरू गए र उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, त्यो देखे अनि त्यो दिन तिनीहरू पनि उहाँसितै बसे। त्यतिखेर दिउँसोको चार बजेको थियो। ४० यूहन्नाको कुरा सुनेर येशूको पछि लाग्ने ती दुई चेलामध्ये एक जना सिमोन पत्रुसका भाइ अन्द्रियास थिए। ४१ सबैभन्दा पहिला, तिनले आफ्नो दाइ सिमोनलाई भेटे र तिनलाई भने: “हामीले मसीहलाई (जसको अनुवाद गर्दा अर्थ हुन्छ, ख्रीष्ट) भेट्टाएका छौं।” ४२ तिनले उनलाई येशूकहाँ लगे। येशूले उनलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो: “तिमी यूहन्नाको छोरा सिमोन हौ; तिमी केफास (जसको ग्रीक अनुवाद हो, पत्रुस) भनिनेछौ।” ४३ त्यसको भोलिपल्ट उहाँ गालील जान चाहनुभयो। तब उहाँले फिलिपलाई भेट्टाउनुभयो र तिनलाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग।” ४४ फिलिप बेथसेदाका बासिन्दा थिए, जुन अन्द्रियास अनि पत्रुसको पनि सहर थियो। ४५ फिलिपले नथनेललाई भेटे अनि तिनलाई भने: “हामीले यूसुफको छोरा नासरतको येशूलाई भेट्टाएका छौं, जसबारे मोशाले आफ्नो व्यवस्थामा अनि भविष्यवक्ताहरूले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका थिए।” ४६ तर नथनेलले तिनलाई सोधे: “के नासरतबाट केही असल कुरा आउन सक्छ र?” फिलिपले तिनलाई जवाफ दिए: “आएर तिमी आफै हेर।” ४७ नथनेललाई आफूतिर आउँदै गरेको देखेर येशूले तिनीबारे भन्नुभयो: “हेर, एक जना सच्चा इस्राएली, जसमा कुनै छल छैन।” ४८ नथनेलले उहाँलाई भने: “तपाईंले मलाई कसरी चिन्नुभयो?” येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो: “फिलिपले तिमीलाई बोलाउनुअघि नै मैले तिमीलाई अन्जीरको रूखमुनि देखेको थिएँ।” ४९ नथनेलले उहाँलाई भने: “रब्बी, तपाईं परमेश्वरका छोरा हुनुहुन्छ, तपाईं इस्राएलका राजा हुनुहुन्छ।” ५० येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “मैले तिमीलाई अन्जीरको रूखमुनि देखें भनेकोले नै के तिमीले विश्वास गरेका हौ? तिमीले यीभन्दा पनि ठूलठूला कुराहरू देख्नेछौ।” ५१ तब उहाँले तिनलाई अझ यसो भन्नुभयो: “तिमीहरूलाई म साँच्चै भन्छु, तिमीहरूले स्वर्ग उघ्रिएको अनि परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसको छोराकहाँ ओर्लिंदै र उक्लिंदै गरेको देख्नेछौ।”
^ यूह १:१ * अतिरिक्त लेख ३ हेर्नुहोस्।
^ यूह १:१७ * मत्ती १:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ यूह १:२४ * इस्वी संवत्‌ प्रथम शताब्दीको यहूदी धर्मको एउटा प्रमुख पन्थ।
^ यूह १:२५ * मत्ती ३:१ को फुटनोट हेर्नुहोस्।